CircuPress: WordPress အတွက်အီးမေးလ်သည်ဤနေရာတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ | Martech Zone
CircuPress: WordPress အတွက်အီးမေးလ်သည်ဤတွင်နောက်ဆုံးပါ။
တနင်္လာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 11, 2013 အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 17, 2014 Douglas Karr
လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ကအာဒံအသေးစားနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးကော်ဖီဆိုင်၌ထိုင်။ အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်မည်မျှခက်ခဲကြောင်းသူကပြောခဲ့သည်။ ExactTarget မှာပေါင်းစည်းမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်။ အာဒံနှင့်သူ၏ဇနီးတည်ထောင်ခဲ့သည် အေးဂျင့် Sauceတစ်ပတ်ကိုသောင်းနှင့်ချီသောအီးမေးလ်များကိုပို့ပေးခဲ့တဲ့အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ရေးဈေးကွက်တစ်ခု။ ပြserviceနာကအီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ (ESPs) ဟာသူတို့ရဲ့ပေါင်းစည်းမှုအင်္ဂါရပ်များကိုအမြဲတမ်းဝယ်လိုအားအပေါ် မူတည်၍ (သို့) သူတို့ရဲ့သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်ကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်လာအောင်လုပ်နေပုံရသည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာသုတေသနအချို့ကိုစတင်တူးဖော်ပြီးအီးမေးလ်ပံ့ပိုးသူအမြောက်အများရှိခဲ့တယ်၊ Amazon ကတောင်မှတစ်ခုတောင်မှစတင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်စျေးနှုန်းနဲ့ရှုပ်ထွေးမှုကမတန်ဘူး။ အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်အာဒံတွင်ရှိခဲ့သည့်သုံးစွဲသူများကို ဦး စားပေးလာသည်နှင့်အမျှသူသည် ပို၍ ပို၍ မှီခိုလာရပြီး ပို၍ သုံးစွဲသည်၊ စိတ်ဓာတ်ကျလာသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ကိုယ်ပိုင်တည်ဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ တစ်နှစ်ခန့်အကြာတွင်အာဒံ၏ပလက်ဖောင်းသည်သူ၏ကိုယ်ပိုင် MTA (Mail Transfer Agent) မှပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ အာဒံသည်သူ့ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၎င်းအပေါ်တွင်လည်းခြေရာခံခြင်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ထို့အပြင်သူ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုသည်သူယခင်ကလုပ်ဆောင်ခဲ့သောပလက်ဖောင်းအားလုံးနှင့်တန်းတူဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်တွင်သူ၏ကျယ်ပြန့်သောအသုံးပြုမှုအတွက်သူစီစဉ်ထားသည့်အခြေခံအဆောက်အအုံကိုမည်သို့အသုံးချနိုင်မည်ကိုစတီထွင်ခဲ့သည်။ နှင့်အတူ Martech Zoneသုံးစွဲသူအရေအတွက် ၁၀၀၀၀၀ အထိတိုးလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အီးမေးလ်ရောင်းချသူအတွက်ငွေအနည်းငယ်ဖြုန်းတီးခဲ့ကြပြီးမပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပါ။ ကျနော်တို့စနစ်နှစ်ခုကိုစီမံခန့်ခွဲရတယ်၊ တစ်ခုကအကြောင်းအရာရေးဖို့၊ နောက်တစ်ခုမှာစာရင်းသွင်းသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုစီမံတယ်။ ငါတို့ဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိ run လို့မရဘူး WordPress?
ငါတို့… WordPress သည်ထိုနှစ်များအတွင်းရှည်လျားသောလမ်းကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။ အခွင့်အလမ်း၏သော့ချက်ထုံးစံ post ကိုအမျိုးအစားများကိုထည့်သွင်းခဲ့သည် စိတ်တိုင်းကျစာမူအမျိုးအစားများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားခေါ်ဆိုသည့်အမျိုးအစားတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်စေသည် အီးမေးလ်က နှင့်အီးမေးလ်ကိုတည်ဆောက်ရန်ပုံမှန်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်တင်းပလိတ်စနစ်ကိုသုံးပါ။ အာဒံသည်သူ၏အခြေခံအဆောက်အအုံကိုယူခဲ့ပြီးယခုအခါကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် plugin ကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူသည်အကြောင်းအရာကိုဖန်တီးရန်နှင့်စီမံရန်အတွက် plugin ကိုသုံးနိုင်သည်၊ CircuPress သည်ပေးပို့ခြင်း၊ ခြေရာခံခြင်း၊
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာတစ်နေ့တာအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်၊ ငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ စတီဖင်ကအဲဒါကိုပြန်လည်ရေးခဲ့တယ်၊ ငါတို့စမ်းသပ်၊ စမ်းသပ်၊ စမ်းသပ်၊ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်တို့ WordPress သို့ပလပ်အင်တင်သွင်းခဲ့ပြီးသူတို့သည်အကြံဥာဏ်ကောင်းများစွာပေးခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအာဒံသည်တင်းပလိတ်၏အဓိကအပိုင်းအချို့ကိုပြန်လည်ရေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သောကြာနေ့တွင်ထပ်မံတင်သွင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောသတင်းကိုမရမှီအချိန်ကြာမြင့်စွာမလိုတော့ပါ။ WordPress ကိုအတည်ပြုပါသည် ဆပ်။ WordPress အတွက်အထူးတည်ဆောက်ထားသည့်တစ်ခုတည်းသောအီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်အချို့ကိုထည့်ပြီးပါပြီ။ ဤ plugin တွင် subscription form widgets, shortcodes နှင့် functions များပါ ၀ င်သည်။ သင်၏ပလပ်ဂင်ကသင်၏အီးမေးလ်များကိုသင်၏ site ပေါ်တွင်အလိုအလျောက်ထုတ်လွှင့်သည် - သင်၏အွန်လိုင်းမြင်ကွင်းသည်သင့်ကိုယ်ပိုင် site ပေါ်တွင်မှန်ကန်သည်။ နေ့စဉ်နှင့်အပတ်စဉ်အီးမေးလ်များကိုသင်အလိုအလျောက်ရရှိပြီးအကြောင်းအရာအသစ်ရှိတိုင်းထွက်သွားပါလိမ့်မည်။ တကယ်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ embedded videos တွေကို screenshots တွေနဲ့ play button တွေနဲ့အစားထိုးလိုက်တာပါ။ ဒါကြောင့်ပုံတွေမဖွင့်တဲ့အီးမေးလ်သုံးစွဲသူတ ၀ က်ကစာဖတ်သူကိုဗီဒီယိုကိုဖွင့်ဖို့ကလစ်နှိပ်ပါ။ ပိုမိုသောအင်္ဂါရပ်များအဘို့အထောင့်လှည့်ပတ်လာမယ့်ကြသည်!
စျေးကြီးသောအီးမေးလ်ရောင်းချသူများနှင့်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးသင်၏အကြောင်းအရာကိုအမှန်တကယ်အသုံးချလိုပါသလား။ စာရင်းသွင်းပါ ဆပ် ဒီနေ့ ဒီဘလော့ဂ်မှာစာရင်းပေးသွင်းထားသူတွေကို CircuPress အဖြစ်ပြောင်းပြီးပြီ။ စာရင်းသွင်းထားဖို့လိုတယ်။
သင်၏ Template ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ
သင်၏ Template Code ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ
သင့် template ကို preview လုပ်ပါ
Tags: wordpress အတွက်အီးမေးလ်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး wordpresswordpress များအတွက်သတင်းလွှာwordpress အီးမေးလ်wordpress အီးမေးလ် plugin ကိုwordpress သတင်းလွှာwordpress သတင်းလွှာ plugin ကိုwordpress စာရင်းပေးသွင်းထားသူ plugin ကို
Graphic Design Jargon အတွက်လမ်းညွှန်
14:2013 pm မှာနိုဝင်ဘာ 10, 43
ဟေ့ဒေါက်ဂလပ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါကတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်ပြီးသေချာကြည့်မည်။
22:2013 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 7, 21 တွင်
ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကြည့်ရတာအရမ်းကိုဆွဲဆောင်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့အမှန်တကယ် AWeber base ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ မင်းရဲ့ပလက်ဖောင်းကိုငါပြောင်းလို့ရမလား။
စကားမစပ်။ CircuPress ၏ရှေ့စာမျက်နှာတွင်“ အီးမေးလ်အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သောစီးပွားရေး WordPress Plugin ဟုအမည်ပေးထားသော CircuPress” အမည်ရှိစာသားစာသားများရှိသည်။ ထိုနေရာတွင် WordPress ကိုမဖြစ်မနေထည့်သွင်းရမည့် WordPress ပလပ်ဂင်များ၏ထိပ်ဆုံး ၆ ခုတွင်ဖော်ပြထားသည်။ မင်းပြောချင်တာက "CircuPress ကိုအမည်ပေးထားတယ် ... "
22:2013 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 8, 26 တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် @guillermoziegler: disqus! သင် AWeber အသုံးပြုပုံပေါ် မူတည်၍ ။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏နေ့စဉ်သို့မဟုတ်အပတ်စဉ်အီးမေးလ်များကိုပေးပို့ရန် AWeber ကိုသာအသုံးပြုပါကသင်၏စာရင်းသွင်းသူများကို (အီးမေးလ် ၅၀၀၀ စီ) တင်သွင်းနိုင်သည်။ ထိုအခါဆုံးမမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် - ငါ site ကို updated ပါတယ်!
23:2013 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 12, 21 တွင်
နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခု ... လိုအပ်လျှင်ကျွန်ုပ်၏အစီအစဉ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ပါသလား။
23:2013 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 12, 27 တွင်
ငါတို့အခုငွေတောင်းခံတာကိုလုပ်နေတယ်၊ ​​ဟုတ်တယ်၊ လုံးဝ!